Metalco nhandare → Mudiki Urban Architecture • Mugadziri • Distributor
Dzazvino nzvimbo yekutamba inobvumira kusagadzikana uye kwakachengeteka kunakidzwa mumhepo yakashama kwete chete kune vana veese mazera, asiwo kune vechidiki.
Kunakidzwa swings uye zvese zvishandiso zvakaiswa panzvimbo yekutamba, kunyanya painochengetwa mukambani yevaunoshanda navo, inzira huru yekushandisa nguva yemahara, uye panguva imwechete inotsigira kukura kwepfungwa nemuviri wechidiki.
Nhandare dzevana tinogona kusangana kwete chete kuzvikoro neku kindergarten, asi zvakare mumapaki nemagadheni epamba, nekuti zvinozivikanwa kwenguva yakareba kuti kutamba nevezera ravo mumhepo pachena kunotendera zvirinani zvemagariro uye mota kukura kwemwana, kunovandudza kugona kwayo uye chimiro chehunhu.
pamasikiro mugadziri nhandare Nekudaro, iyo inofanirwa kutora kwete kwete chete yezvinhu zvinoyevedza uye zvine mavara, asiwo nekuvimbika kwemidziyo. Ndosaka zvichikosha kusarudza nzvimbo inotamba vana, ingave iri paki yeguta kana gadheni repamba. nzvimbo dzekutamba dzakasimbiswa.
Bindu midziyo yekutamba Metalco makambani anotendera iwe kuti utambe wakachengeteka kunze nekuda kwemidziyo inonakidza uye inoshanda inogadzira iyi nhandare. Idzi ndidzo mhando dzese dzekuchinjika dzinoitirwa munhu mumwe kana vanopfuura vanhu, manera, dzimwe nguva carousels, masiraidhi uye zvese zvigadzirwa zvekukwira.
Nhandare yekutamba iyo inofanirwa kuve nechokwadi chekuchengetedza kwekutamba pane zvese zvishandiso zvinofanirwa kuchinjiswa kune iyo zera uye kugona kwemuviri kwevashandisi.
Midziyo nematoyi zvakaitirwa vana vadiki zvidiki, zvine mavara uye zvakadzika-zvakadzika kuti zviitise kushandiswa uye kuve nechokwadi chekuchengetedza, kunyangwe kune vana vasina hunyanzvi. Nzvimbo dzekutamba dzebindu, uko vana vakuru vanotamba, vanopa mamwe manzwiro uye vimbiso yekunakidzwa kukuru pane zvishandiso zvakaoma zvishoma. Kune vashandisi vakakura kwazvo, iyo nhanho nhanho yatove yakanyanya kukwirira, kuitira kuti vechidiki vasango dzidzira kugona, asi zvakare kukudziridza simba uye kutsungirira.
Nhandare dzevana zvakarongedzwa mubindu, ivo vanowanzo kuverengerwa nekuyera uye dzimba dzekudyara dzakaiswa pakakwirira. Pamusoro pezvose zvekushandisa zvekutamba, iwe unofanirwa zvakare kurangarira nezve yakachengeteka nzvimbo iyo inotora chero kudonha. Kana uchironga nzvimbo yekutamba, zvakakoshawo kuchengetedza nzvimbo yaunogona kuisa zvigaro netafura kuitira kuti vana vadye vachitamba kana kuzorora mumumvuri.
Nhandare yekutamba yakagadzirirwa naMetricco, mutungamiri wenyika zvidiki zvekuvakwa Ivo vanozivikanwa neazvino dhizaini uye ergonomic chimiro, pamwe nemavara anonakidza uye kugadzikana kwakaringana, iyo inosimbisa inonaka uye yakachengeteka kutamba.
pamasikiro mugadziri wenhandare dzevana inofanirwa kutarisisa zera revana iro iro rinovagadzirira nzvimbo yekutamba nekugadzira nzvimbo yevabereki kana vachengeti vanochengeta vana panguva yekutamba.
Kuronga zvinoshanda nhandare yebindu inogona dzimba zvishandiso zvakagadzirirwa kwete chete zvevana nevechiri kuyaruka, asiwo zvevakuru uye vanoshingairira vakuru. Panzvimbo yakadai, nhengo yega yega yemhuri inogona kuzviwanira chimwe chinhu uye kwete kungonakidzwa chete, asi zvakare kutarisira hutano hwavo uye mamiriro enyama, uye izvi zvese zvinogona kuitwa panze uye nekambani yevavanoda.
Midziyo yakagadzirirwa naMetco, ichigadzira nzvimbo dzekutamba dzebindu, zvakagadzirwa nealuminium uye mapurasitiki ane mavara. Musanganiswa wakadai unonakidza uye unovandudza zvinhu unobvumidza iwe kuti ugadzire mafomati ezvivakwa zvakagadzirirwa kutamba. Iyo yekutamba yegadheni inobvumira mhuri yese kuti ifare, nekuti kwete vana chete, asiwo vanhu vakuru, vane shungu dzekutamba panze.
Izvo zvinofanirwa kuyeukwa zvakare kuti nhandare inofanira kuona kuchengetedzwa kwevana vari kutamba pairi, saka zvakakodzera kusarudza nzvimbo yekutamba ine chitupa.
Dhizaini yenhandare yegadheni inofanirwa funga nezvezera revana vari kutamba pairi, topography, chiedza chezuva, kuoneka kwevana kubva kumahwindo eimba uye nenzvimbo yekuchengetedza yezvose zvishandiso panhandare yekutamba. Pamusoro pemidziyo yakasimba, nzvimbo yakachengeteka inobata mapopoma yakakoshawo.
Dzazvino nhandare yebindu ndeyekudyara iyo isingobvumidze chete mwana kunakidzwa kukuru, asi zvakare inowedzera kusimba kwemuviri wake, saka zvakakosha kuti nhandare inovimbisa yakanyanya kuchengetedzeka kwevana vanotamba pairi.
Naizvozvo, zvakakodzera kusarudza iyo chaiyo dhizaini uye mugadziri wemidziyo yakaiswa panhandare, ichivimbisa kutevedzera nemhando inoshanda yehutano nekuchengetedza.
inflatable nhandarenhandare yematandachitupa chemba yekutamba imariiimarii nhandarekuvaka sei nhandarekuvaka sei nzvimbo yekutamba yakagadzirwa nematandakugadzira nzvimbo yekutambanzira yekuita nhandare yevanamutambi wenhandarepavement yenhandarenhandare yekutambanzvimbo yekutambanhandare yevakurunzvimbo yekutamba yevananhandare yevana yeWarsawnhandare yebindunhandare yematandanhandare yematanda nzira yekugadziranhandare muGdańsknzvimbo yekutamba GdyniaKatowice nhandareKrakow nhandarenzvimbo yekutamba yemumundaplayground muchirungunhandare poznańplayground mugadzirinzvimbo yekutamba dhizainiSzczecin nhandarenhandare mumundanzvimbo yekutamba Warsawnzvimbo yekutamba Wrocławnzvimbo yekutamba yakavigwamidziyo yekutambamuparidzi nhandarenzvimbo yekutamba yemvura